Ungawathola kanjani amawebhusayithi nge-imeyili? | Kusuka kuLinux
Kunemisebenzi eminingi esivumela ukuthi sithole amawebhusayithi nge-imeyili. Lokhu kuyasiza kakhulu uma singenayo i-FULL internet. Ake sibone ezinye zazo.
3 Ikhasi lewebhu uRumkin
Njengoba igama layo likhombisa, okwenzayo ngale nsizakalo ukusithumela iwebhusayithi esifuna ukuyibona ngefomethi ye-PDF. Ukuyisebenzisa kufanele sithumele i-imeyili kuleli kheli:
Ne-URL yesayithi esifuna ukuyibona odabeni.
Isevisi esiyisebenzisa kakhulu, ikakhulukazi ngoba isivumela ukulanda ezinye izinhlobo zamafayela. Okubi kulabo abangenayo i-intanethi ukuthi ngeke bakwazi ukusebenzisa le sevisi uma bengabhalisi ngaphambili kusayithi le- I-Flexamail.
Ukuyisebenzisa sithumela i-imeyili kuleli kheli:
Ikhasi lewebhu uRumkin
Le nsizakalo futhi ayidingi ukubhaliswa futhi isithumela isiza kufayela elicindezelwe nakho konke ukwakheka kwalo. Ukuyisebenzisa sithumela i-imeyili ku:
Futhi kufanele sibeke udaba:
Ababona bonke abayikho, kepha bayikho konke abayikho futhi bayasebenza. Uma wazi omunye umuntu, shiya imininingwane kumazwana abekiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungawathola kanjani amawebhusayithi nge-imeyili?
Kuhle kakhulu! Futhi mhlawumbe ungangicacisela umbuzo:
"Uma bevinjelwe iGoogle, bazokwazi kanjani ukuthola noma yiluphi usesho nge-imeyili?"
Ngiyabonga kakhulu ngama-vibes amahle njalo ...
Usebenzisa enye insizakalo yeposi. Yize kungcono ukungakhulumi ngalokhu lapha, ukuthi bakwazi kangakanani ukuvala isiza hahahaha
Njalo lapho ngiqala ukufuna okuthile, okujwayelekile… .unakho lapha hahaha
HAHAHAHA okuncane kwakho konke kepha kusezingeni elihle 😀
I-athikili yakho yinhle kakhulu, ngiyabonga ngami kuzoba wusizo olukhulu ngoba ngihlala ezweni lapho kunobushiqela khona (Cuba) okuvimba iningi labantu ukuthi lingene kwi-inthanethi, uma kungeyona inkathazo ungangitshela amanye amakheli noma izinsizakalo zalokho thayipha (okwamanje) noma okungenani isayithi elilodwa lapho kuvela khona uhlu lwalezo zinsizakalo ezisemthethweni njengamanje
ukwanga futhi ngiyabonga i-imeyili yami: lacedaista@yahoo.es
I-IP yakho ayiveli eCuba.
compadre, kuhlale kukhona umuntu othanda ukuthola inkinga, kungani abeke ipolitiki lapha uma lokhu kuzofunda futhi ngaleyo ndlela kube nobumnandi? Futhi lokhu okuthunyelwe kwenzelwe lokho, ukusiza thina okuthi kunoma yiliphi izwe sikuthole kunzima ukufinyelela i-INTERNET, noma ngabe iyini imbangela, ngoba lowo muntu akazibonanga izibalo zokuhamba emhlabeni wonke lapho umuntu ocebile futhi enkulu njengoba i-Afrika igcina emazweni amaningi ngaphandle kokufinyelela ku-INTERNET kuningi labantu bayo? Futhi obani ababeletha lonke usizi lwayo kulelo zwekazi?
Ngakolunye uhlangothi, igalelo lomngani wami lihle kakhulu, ngihlala naseCuba futhi nginezinkinga futhi ukuxhumana engikwazi ukukufinyelela kuhamba kancane, yingakho kungikhonza ngoba amakhasi amaningi awavuleki ngokuphelele uma enemidwebo, ngisho nale bhulogi Nenza kahle kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu.
Umnikelo uthakazelelwa egameni labaswele baleli zwe
Sawubona, lokhu okuthunyelwe kuyathakazelisa kakhulu, kuze kube manje yikhona okunginike umphumela omuhle kakhulu, ngiyabonga kakhulu ngolwazi. Ngiyacela, uma kungeyona inkathazo, ungangitshela ukuthi yiziphi izinsizakalo ezikhona ngalesi sikhathi lapho uma uthumela isixhumanisi ekhasini lewebhu usebenzisa i-imeyili yami, bazongibuyisela leli khasi ngefomethi ye-PNG - JPG, kube sengathi bekuyisithombe-skrini. Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili futhi ngilindele impendulo yakho.